सुनको मूल्य घट्यो, कति पुग्यो तोलामा ? – hamrosandesh.com
सुनको मूल्य घट्यो, कति पुग्यो तोलामा ?
मंगलबार स्थानीय बजारमा सुनको मूल्य घटेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसाय महासङ्घका अनुसार मंगलबार सुन प्रतितोला ३ सय रुपैयाँले घटेको हो । सोमबार प्रतितोला ९१ हजार रुपैयाँमा कारोबार भएको सुनको मूल्य आज ९० हजार ७ सय रुपैयाँ भएको छ ।
सोमबार तोलामा ९१ हजार रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाल सुनको मूल्य मंगलबार घटेर तोलामा ९० हजार ७०० रुपैयाँमा कारोबार भएको हो ।
यस्तै तेजाबी सुन तोलामा ९० हजार २०० रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । यसैबीच मंगलबार चाँदीको मूल्य भने स्थिर रहेको छ । सोमबार तोलामा एक हजार ३०० रुपैयाँमा कारोबार भएको चाँदीको मूल्य मंगलबार पनि सोही मूल्यमा कारोबार भएको हो ।